Nin Maraykanka laga tarxiilay oo ku dhintay Ciraaq - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaNin Maraykanka laga tarxiilay oo ku dhintay Ciraaq
Nin Maraykanka laga tarxiilay oo ku dhintay Ciraaq
Nin Maraykanka ku noolaa illaa yaraantiisii oo balse laga tarxiilay magaalada Detroit ayaa ku dhintay dalka Ciraaq sida uu sheegay garyaqaankiisa.
Jimmy Al Daa’uud oo 41 jir ahaa ayaa la sheegay in uu Ciraaq ka heli waayay dawada Insulin taas oo uu u qaadanayay xanuunkiisa macaanka.
Waligiis ma uusan tagin Ciraaq, afka carabigana ma uusan aqoonin, hase yeeshee waxaa halkaas loo tarxiilay bishii June xili la tarxiilayay dadka kasoo jeedda Ciraaq ee mar uu ku dhacay xukun maxkamadeed.
Edward Bajoka oo ah garyaqaanka Jimmy ayaa sheegay in qofkan macmiilkiisa ah horey ay maxkamad u xukuntay, laguna heley dambi.
Balse Laanta socdaalka waxa ay sheegtay in ninkan 20 jeer uu xukun ku dhacay muddo 20 sanno gudahood ah, waxaana ka mid ahaa haysashada hub sharci darro ah iyo guryo uu u dhacay.
Waxa ay laanta intaas ku dartay in la siiyay daawo ku filan ka hor intii aanan la tarxiilin.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa carbaareysay geerida Jimmy, waxayna sheegtay in aysan la yaab ahayn natiijada ka dhalan karta sharciyada socdaalka ee Maraykanka.
Qoyska ninkan oo ku sugan magaalada Detroit ayaa la sheegay in ay ka fikirayaan sidii ay dacwad u furan lahaayeen.
Bishii June 2017-kii, maamulka Trump ayaa Maraykanka ka tarxiilay illaa kun qof oo reer Ciraaq ah, taas oo timid kadib heshiis lala gaaray dowladda Ciraaq, taas oo shuruud looga dhigay in maamulka Trump uu Ciraaq ka saaro liiska dalalka dadkooda aysan u safri karin Maraykanka.
Muuqaal aad loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay Jimmy oo ka hadlaya sidii Ciraaq loogu tarxiilay, iyo sida uu dhibka uga marayo xanuunkiisa macaanka. Waxa uu sheegay in uusan dawo ku haysanin Ciraaq.
Jimmy ayaa waxa uu ku cataabayaa in la caawiyo, isaga oo dowladda Maraykanka ka codsada in la celiyo.
Xildhibaan ka tirsan Aqalka Congress-ka Maraykanka, kana soo gala gobolka Michigan Andy Levin ayaa ku dooday in aysan ahayn in markii horeba la tarxiilo Jimmy.
Dawladda Federaalka Oo Meel Adag Iska Taagtay Doorashada Jubaland
Suudaan oo cafis u fidisay laba hoggaamiye oo dil ku xukunna